Ingcambu yesikwere: yintoni, izikwere ezigqibeleleyo kunye neeradicals ezingenanto Discover ️ Discover Online ▷ ➡️
Ingcambu yesikwere ngumsebenzi wemathematika, njengokuphindaphinda, ukwahlula, ukudibanisa, kunye nokudibanisa. Kwingcambu yesikwere kufuneka sifumanise ukuba leliphi inani eliphindwe kabini elinokunika iziphumo ezingaphakathi kwengcambu. Oko kukuthi, kufuneka sifumane inani eliziphindaphindileyo ngokwalo, linika iziphumo ezilindelekileyo.
1 Awunanto kwaphela
2 Izikwere ezigqibeleleyo
3 Izikwere ezigqibeleleyo azinasiphelo.
4 Ungayibala njani ingcambu yesikwere?
Nanini na xa ingcambu ivela njengakumzekelo wesibini, ngaphandle kwenani esiqwini (phezulu), oko kuthetha ukuba zimbini apho, kodwa kwakungekho sidingo sokucacisa. Akukho bukho bokuba i-radical ithambile kwaye yingcambu yecube, umzekelo. Iya kuhlala iyingcambu.
Ayingawo onke amanani aneengcambu ezisisikwere kuba, kuba ingcambu yesikwere kukuphindaphindwa kwenani ngokwalo, akunakwenzeka ukuba amanye amanani abe nengcambu yesikwere.
Ingcambu ka 4, umzekelo, ngu 2, ukusukela 2 x 2 = 4. Kwaye yintoni ingcambu ka 5? 3 x 3 = 9. Akukho nani liziphindaphindileyo ngokwalo linika isi-5 kwisiphumo. Ngenxa yoku, 4 no-6 babizwa ngokuba zizikwere ezigqibeleleyo, kodwa u-5 akanguye. Nalu uluhlu lwezikwere ezigqibeleleyo:
Izikwere ezigqibeleleyo azinasiphelo.
Njengamanani angenasiphelo, kunjalo nezikwere ezigqibeleleyo, njengoko ziziphumo zokuphindaphinda naliphi na inani ngokwalo. Cinga ngenani elikhulu kakhulu, umzekelo, 1495, liphindaphindwe ngokwalo linika ama-2235025. Ke ngoko, sinokugqiba ukuba inani lezikwere ezigqibeleleyo infinito.
Ungayibala njani ingcambu yesikwere?
Xa ingcambu yesikwere inenani elikhulu kakhulu, njenge-2235025 esikhankanye ngaphambili, kunzima kakhulu ukwazi ukuba yintoni ingcambu yesikwere. Ke indlela elula yokubala ukufumana ingcambu kukwenza eyona nto iphambili. Kungakhohlisa ekuqaleni, kodwa emva koqeqesho oluninzi, uyakubona ukuba ilula kakhulu kwaye imnandi.